THE CAYAYAANKA UGU WEYN EE GABBALDAYAHA, SIDA LOO ILAALIYO DHIRTA KA SOO CAYAYAANKA WAXYEELLO - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Cayayaanka Sunflower: sharaxaad, sawir, hababka halganka
Sunflower waa geedka sanadlaha oo aad u sarreeya. Xidigga ubaxa ayaa dhowr mitir oo qoto dheer galay carrada. Laga soo bilaabo sprout weyn ee ku saabsan mitir u ah dhinacyada dhinaca xididdada. Qalabka gabbaldayaha waa mid adag oo qaro weyn leh, oo leh asal furan. Mid ka mid ah dhirta waxaa jira 15 ilaa 35 caleemo, adadag iyo calaamad. At sare ee asliga ah waa inflorescence weyn oo ku wareegsan caleemo cagaaran.
Duufaannada dibadda ah waa ubaxyo nadiif ah. Intaa waxaa dheer, gabbaldayaha ayaa leh ubaxyo labadaba oo ah midab ama midab huruud ah. Miraha gabbaldayaha waa abuuryo leh saldhiga gudaha. Iyadoo ku xiran nooca dhirta, cawska midhaha ayaa leh midabkiisa: laga bilaabo cadaan ilaa madow.
Ma taqaanaa? Sunflower wuxuu jecel yahay dalalka leh jawi diiran, iyo sidoo kale ciidda bacrin ah iyo meel qorrax leh. Maaha wax la yaab leh, wadankiisa hooyo waa Mexico. Laga soo bilaabo wadankan, geedka waxaa loo dhoofiyey Ruushka iyo Ukraine.
Sunflower, nasiib daro, waxay leedahay cadow badan. In this article waxaan ku tilmaami doonaa cayayaanka iyo cudurada ku jira gabbaldayaha iyo sida loola dhaqmo iyaga.
Waa maxay halis u ah aboorka qoyan gabbaldayaha
Munaasabada qorraxda qorraxdu waa mid halis ah mudo kordhinaysa dadkeeda, taas oo dhacda wareega - hal mar 10-12 sano. Cayayaanka ayaa yaraynaya dhalidda ilaa 60%, xaaladaha qaarkoodna waxay keeni karaan 100% luminta beeraha. Xadka ugu sarreeya ee waxyeelada - tobanka qofba hal mitir oo labajibbaaran.
Si loo ilaaliyo gabbaldayaha laga bilaabo aboorka qoyan, qulqulo qoto dheer, beerashada oo u dhexeeya saf, loosening of hilling, daaweynta diyaargarowga inta lagu guda jiro horumarinta xayawaanka, iyo sidoo kale diyaarinta kiimikada wax ku ool ah - bitoksibibalin iyo lepidotsid ayaa loo baahan yahay.
Dagaalka Sunflower Shponoskoy
Shponoska sunflower - cayayaanka yar yar 4-5 cm dhererka. Xayawaanka laftiisa waa madow, daboolay timo cawl. Galka caloosha waxaa ku jira balaasto dheer, iyo antennae waxay u egtahay sida cirbadaha. Baalasha gaaban oo gebi ahaanba ma daboolaan caloosha. Lugaha waa mid guduudan oo jaale ah, madaxa ayaa had iyo jeer hoos u dhacaya.
Shaponosok dumar ah ukumo ku jirta sinaha caleemaha. Ka dibna dirxiga jaalaha ah ayaa ka muuqda iyaga oo leh madax madaxa madow iyo saddex lammaan oo lugaha la daboolay timaha dheer. Dirxiga wuxuu ku faafaa geedka, wuxuu geli karaa xuddunta, wuxuuna ku dhejiyaa istaroog joogto ah. Caadi ahaan waxay cunaan saddax meelood oo ugu horreeya ee asliga ah, oo ka bilaabma xagga hoose. Xilliga dayrta, dirxiga wuxuu u beddelaa pupae iyo hibernate.
Tallaabooyin waxtar leh oo lagula dagaallamo shpononkoy: qulqulo qoto dheer, nadiifinta waqtigeeda, ka shaqeynta vantex, oo ay bixiso mid deggan ama fufanon.
Sida loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo aan abooredka gabbaldayaha
Waa wax aan suurtagal ahayn in si buuxda loo ilaaliyo beertoaga cayayaankan khatarta ah. Ugu yaraan u nugul yahay waa Beelaha gabbaldayaha ee noocyada hubka. Abuurtoodu waxay ku kala duwan yihiin qolof rasmi ah, oo aan laga helin gawaarida. Qaabkan waxaa la sameeyay todobaad ka dib bilowga ubax. Natiijo ahaan, cayayaanka waxay cunaan caleemaha oo keliya, miraha way kudhacaan.
Waa muhiim! WaayoWaa inaan yareynaa tirada cayayaanka kasta ee u baahan in la sameeyo jaridda dhirta.
Qoryaha suufka - mid ka mid ah cayayaanka ugu weyn ee gabbaldayaha, kaas oo si gaar ah ugu badan koonfurta Ukraine. Kani waa balastar leh wingspan ah 30-40 mm. Baalasheeda hore waxay leeyihiin madow iyo caleemo huruud ah, baalasha dambe ayaa iftiin leh dhar burgundy ah iyo meel mugdi ah ee dhexda. Roobka buuraha suufka ahi wuxuu gaari karaa 35-40 mm dherer. Jidhkeedu wuxuu ku daboolan yahay burooyin yaryar. Midabka - laga bilaabo cagaar cagaaran iyo jaalle ah ilaa bunka. Ardaygu waa mid guduudan oo midabkiisu casaan yahay, wuxuu leeyahay 15-20 mm dherer. Overwinters ee ciidda.
Si looga adkaado moobiilka, waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo haramaha wakhtiga, si loo soo saaro dayrta qulqulaya qoto dheer, si loo beero ciidda u dhaxaysa saf 6-8 cm oo qoto dheer.
Xashiishadani waxay gaartaa dherer 20 mm, jidhkeeda waxaa lagu daboolay timo jaale ah. Dirxiga foosto waa cirro huruud ah, iyada oo aan lugta lahayn. Dumarka ayaa ukumo ukumaha gudaha qorraxda. Si arrintan loo sameeyo, waxay jeexaan maqaarka si ay u sameeyaan dabool leh dhexroor oo ah 5-8 mm oo leh farqiga qoto dheer ee dhexda. Hal haween ah ayaa u dhigma ilaa 50 ukun.
Xakamaynta cayayaanka qorraxdu waxay noqonaysaa mid waxtar leh haddii:
geedka hore u beeraan;
ka dib goosashada, gooyaa afkoda sida ugu dhow dhulka ugu badan;
ka saar dusha sare ee beerta;
waqti si aad uga takhalusto caws.
Sida loo wajaho aphids on gabbaldayaha
Inta badan aphids waxay jecel yihiin in ay nibble yihiin gabbaldayaha inta lagu jiro mudo dheer ah abaar daa'in ah iyo heerkulka hawada sare. Laakiin cayayaanka intooda badani waa la cunaa ladybugs. Sababtan awgeed, aphids ma keeni karto waxyeelo badan, iyo dhirta dhirta kiimikooyinka looma baahna.
Ma taqaanaa? Anaga oo ah, cayayaanka noocan oo kale ah sida aphid waxay u egtahay inay tahay hal qoys, laakiin dhab ahaantii cilmi-baarayaashu waxay leeyihiin ilaa 4,000 nooc oo aphid ah.
Xaalado dhif ah, aphids waa wax aad u tiro badan, gardarro leh oo si aad ah u waxyeeleyn kara dhulka. Khatarta ah cayayaanka waa in ka dib markii ay weerartay on sun-gabbaldhac, burooyinkeeda dhirta aan la shaacin. Sidaa darteed, goosashada wanaagsan ma noqon doonto. Xaaladdan oo kale, daaweynta kiimikooyinka waa in ay ahaato.
Tallaabooyinka lagu xakameynayo guji
Dirxiga badan ee nutcracker u dhintaan inta lagu jiro farsamooyinka farsamada ee ciidda. Waxaa haboon in la fuliyo nidaam noocan oo kale ah ka hor intaanay cayayaanka geli karin qoto dheer ee ciidda.
Waqtiga cawska, gaar ahaan cawska.
Carruurta Acidic waxay u baahan yihiin in la qaboojiyo, waxay leedahay saameyn halis ah on dirxiga ee cayayaan.
Laakiin tallaabooyinkan oo kale waxay yareyn karaan tirada riixayaasha. Habka kaliya ee ugu habboon ee looga hortago burqadka waa daaweynta abuurista.
Waa maxay mowduucyada halista ah (madow) ee gabbaldayaha
Dirxiga khafiifka ah wuxuu aad u la mid yahay riixa, laakiin leedahay kala duwanaansho yar:
ee dirxiga ee coppers, labada lugood ee hore ee lugaha ka weyn inta ka hartay;
Madaxoodu waa buluug.
oo si muuqata u horumariyay dibnaha sare.
Cayayaanka Tani waxay horay u soo baxaan jiilaalka, ficil ahaanna leh kuleylka ugu horeeya. Chernotelki geedo gnaw ee gabbaldayaha, ka dibna iyaga cun, kuwaas oo yaraynaya goosashada.
Tallaabooyinka ugu caansan ee loola dagaallamo steppe-socodka tartiib-tartiibka: beerashada, beeraha qoto dheer, beerashada beeraha. Weli waxaan u baahanahay inaan xijaabinay waqtigeena, gaar ahaan cawska. U fiirso qiyaasta seeding, bacriminta iyo quudinta dhirta si kor loogu qaado kobcinta kobaca. Ka hor inta beero, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo abuurka leh cayayaanka.
Cornfish waa qoryo ovalle ah oo leh qalbi buluug ah, 7-9 mm dheer. Waxay leedahay muraayad isku mid ah. Cayayaanka ayaa ku dhaafa lakabka dusha sare ee carrada iyo gabbaadyada kala duwan. Cayayaanka waxay ku nool yihiin 2-3 sano, iyo dirxiga wuxuu ka yimaadaa 12 ilaa 14 bilood. Cayayaanka waxay bilaabaan inay sareeyaan bartamaha guga. Dumarku waxay dhigaan ilaa 500 ukumood oo ah lakabka hore ee carrada inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Weevil dabocase madow
Weevil Beet waa geedka madow ee cabbirka weyn. Cayayaankaasi ma laha baalal, madaxkuna waa mid yar oo yar oo leh qulqul dheer. Caloosha waxaa lagu daboolaa timo iyo dhibco madow.
Ka ilaalinta sunflower ka soo cayayaanka:
codsan Bacriminta organic iyo macdanta si ay ciidda;
si joogto ah uga saar caws;
geedo geedi socod ah oo leh diyaarin wax ku ool ah;
ka dib goosashada ka dib waxaa wanaagsan in la dabciyo ciidda.
Cayayaankaasi waxay sababaan dhibaatooyin by jeexitaanno casiir laga soocay qeybo kala duwan oo ka mid ah dhirta. Kuwa ugu khatarsan waa jabitaanka abuurka. Dheecaan dheeri ah ayaa kudhaca. Sidoo kale, cayayaanka si xun u saameyn ku beerashada iyo tayada la iibsado ee miraha. Tirada ugu badan ee suurtogalka ah ee cayayaanka waa 10 cayayaanka dhirta. Si loola dagaallamo cayayaanka qorraxda, waxaad u baahan tahay wakhti aad ku burburiso caws iyo geedo burburiya. Haddii ay jiraan wax badan oo cayayaanka, ku buufin gabal gabbaldayaha leh Kemifos iyo Karbofos-500.